कांग्रेस महाधिवेशन : प्रदेश २ अधिवेशन अन्योल - Naya Pageकांग्रेस महाधिवेशन : प्रदेश २ अधिवेशन अन्योल - Naya Page
जनकपुर, १७ मंसिर । सहमति गर्ने र विवाद मिलाउन भन्दै तोकिएको निर्वाचन तालिका सार्दै आफू निकट प्रतिनिधि छनोटमा नेताहरूले बलजफ्ती गरिरहेकाले प्रदेश २ मा कांग्रेस अधिवेशन अनिश्चित भएको छ । क्रियाशील सदस्यता विवादकै कारण प्रदेश २ का ८ जिल्लामा एक महिना ढिलो वडा अधिवेशन थालिएको थियो ।
क्षेत्रीय अधिवेशनको अन्तिम परिणाम नआउँदै जनकपुरको तिरहुतिया गाँछीमा बिहीबार प्रदेश २ को अधिवेशन सुरु भएको छ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले भर्चुअल उद्घाटन गरेको उद्घाटनमा उपसभापति विमलेन्द्र निधि, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव, नेताहरू आनन्दप्रसाद ढुंगाना, महेन्द्र यादव, कल्याण गुरुङलगायतको उपस्थिति थियो । प्रदेश २ मा सबैभन्दा बढी विवाद सर्लाहीमा छ । तेस्रो पटक तोकिएका निर्वाचन अधिकृत भरत राउत बिहीबार काठमाडौं फर्किएका छन् । प्रहरीले जिल्ला सचिव उपेन्द्र कुशवाहको रोहवरमा उनी बस्ने कोठा सिल गरेको छ । राउतले पनि वडा अधिवेशन सम्पन्न गर्न सकेका छैनन् ।
सर्लाही क्षेत्र ४ कै कारण कांग्रेस वडा अधिवेशनमै अल्झिरहेको छ । क्षेत्र नं. ३ को कविलासी नगरपालिका–४ मा पनि संस्थापन र इतरपक्षबीच नवीकरणमा छुट भएका ७ जनाको सदस्यता विवाद छ । क्षेत्र नं. १ र २ को ५ वटा वडामा पनि विवाद देखिएको छ । इतरपक्षका नेता तथा जिल्लाका पूर्व सभापति लक्ष्मण रायले कतिपय वडामा सभापतिले घरमै बसेर प्रमाणपत्र बाँड्न लगाएको आरोप लगाएका छन् । जिल्ला सभापति नागेन्द्रकुमार रायले भने पूर्व सभापति लक्ष्मण रायले केही वडामा जबर्जस्ती गरेको आरोप लगाए ।
बाराको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ को निर्वाचन प्रसौनी र ३ को निर्वाचन कलैयामा भइरहेको छ । क्षेत्र नम्बर २ को क्षेत्रीय अधिवेशन स्थगित भएको दाहालले बताए । रौतहटमा पनि बिहीबार मात्रै कांग्रेसले क्षेत्रीय, प्रदेश र महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट टुंग्याएको छ । चार क्षेत्रमध्ये ३ वटामा सर्वसम्मत भएको छ । क्षेत्र नम्बर ४ मा भने सहमति गरे पनि बुधबार निर्वाचन भएको थियो । रौतहटका सभापति कृष्णा यादवले आफ्नो क्षेत्र नम्बर १ मा क्षेत्रीय सभापतिमा देउवा निकट श्रीराम यादवलाई निर्विरोध गराएका छन् ।
निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ मा मतदान प्रक्रियामा विवाद हुँदा क्षेत्रीय अधिवेशन हुन सकेको छैन । सिरहाका सबै क्षेत्रमा अधिवेशन सकिएको छ । पर्सामा क्षेत्रीय अधिवेशन सम्पन्न भएका छन् । कान्तिपुर दैनिकबाट